Athini amanzi oza kuwasebenzisa kwi-aquariums: yonke into ekufuneka uyazi | Ngeentlanzi
Xa kuziwa ekubeni ne-aquarium, nokuba ngamanzi abandayo okanye amanzi ashushu, eyona nto siza kuba nayo iya kuba ngamanzi kuba kufuneka sigcwalise i-aquarium, ngokuxhomekeke kwiilitha zayo, ngamanzi. Baninzi abantu abangaziyo yeyiphi amanzi oza kuyisebenzisa kwi-aquariums. Ngoku, amanzi asenokuba sesinye sezizathu zokuba iintlanzi zife kwaye oku kunokuba ngenxa yamanzi asetyenziswayo. Ngokwesiqhelo abantu basebenzisa amanzi empompo ukuzalisa ii-aquariums kwaye, sakuba sigcwele, sifaka iintlanzi, kodwa la manzi ane-chlorine kunye ne-chlorine iyingozi kwintlanzi ekhokelela kwizifo kwaye nasekufeni kwezilwanyana.
Ke, kweli nqaku siza kuchaza ukuba yeyiphi amanzi oza kuyisebenzisa kwi-aquariums.
1 Yintoni enokwenziwa?
2 Athini amanzi oza kuwasebenzisa emanzini: iintlobo
2.1 Amanzi etephu
2.2 Amanzi kakuhle
3 Athini amanzi oza kuwasebenzisa kwi-aquariums: abanye
Ukujongana nale ngxaki zimbini izisombululo, zombini ziyasebenza kwinxalenye yam kuba ndizamile. Eyokuqala kukusebenzisa imveliso onokuyifumana kwiivenkile zezilwanyana. Yimveliso ephoswa emanzini ukuyiphelisa, kwimizuzu nje embalwa, i-chlorine enayo kwaye iyenze ilungele ukuba iintlanzi ziphile. Le mveliso ayibizi mali ininzi kwaye ihlala ixesha elide.
Esinye isisombululo ekufuneka senziwe kukuba leyo yokuthatha amanzi ubuncinci iiyure ezingama-24-48 ngaphambi kokutshintsha amanzi okanye ukugcwalisa i-aquarium. Ukuba uvumela amanzi ukuba eme ngezo yure iklorini iyaphuma kwaye amanzi sele elungile kwintlanzi. Ingxaki apha inokuba kukuba unayo i-aquarium yeelitha ezininzi kwaye awufuni ukuba namabhakethi kunye namabhakethi amanzi alindele ukukwazi ukuzalisa i-aquarium.
Abanye abakwenzayo kukuthenga amanzi ezimbiwa, nesisombululo, kodwa kuhlala kubiza kakhulu (phindaphinda inani leelitha ozifuna ngexabiso lamanzi).
Izisombululo zokuqala ezimbini zezo zinokwenzeka ngee-aquariums ezinkulu kunye nezo zinokuthi zingaphantsi kwentloko.
Athini amanzi oza kuwasebenzisa emanzini: iintlobo
Njengoko sisazi, kukho imithombo eyahlukeneyo yamanzi ukubonelela ngezixhobo kunye nokwenza iintlanzi zethu zibe sempilweni. Phakathi kweentlobo zamanzi apho silandelayo.
Ihlala ilungile kwaye ixhaphakileyo esetyenziselwa ukugcina i-aquariums. Oku kungenxa yokukhululeka kokufumana kwaye ayinabacteria kunye nezinto ezinokuba yingozi kubomi beentlanzi zethu. Ingxaki ngamanzi empompo kukuba ezinye iimpawu kufuneka zilungisiwe ngaphambili. Kuba amanzi etephu enzelwe ukusetyenziswa ngabantu, ineempawu kunye nezinto ezithintele izinto eziphilayo. Oku kuyasuswa kubukho bezinto zokubulala iintsholongwane. Kule meko sifumana iklorine. Le klorine ithintela iintsholongwane ezahlukileyo ekubeni zikhule emanzini kwaye iyenza ukuba isele.
I-BPS (R) Ikhabhoni esebenzayo...
Ezinye izinto ezinokuthwalwa ngamanzi ompompo zii-chloramine, ii-fluoride okanye i-ozone. Nangona kunjalo, oku ayisosithintelo ekusebenziseni amanzi etephu. Kwaye oko kukususa iklorini emanzini apompo, kufuneka nje siwashukumise amanzi kancinci kwaye siwayeke aphumle iiyure ezingama-24. I-chlorine iya kuphuma nje. Sinokususa i-ozone ngokucoca amanzi ngesihluzi esisebenzayo sekhabhoni. Enye indlela kukuba Sebenzisa iimveliso ezinjenge-sodium thiosulfate ukunciphisa i-chlorine. Oku kwenziwa ukuba kufuneka sisebenzise amanzi ngokukhawuleza.
Enye into enobungozi ngakumbi enokuhambisa amanzi etephini kwaye enobungozi kwintlanzi bubhedu. Ihlala ivela kwimibhobho uqobo kwaye amanzi ayanyibilika xa emitsha. Ukuba imibhobho mitsha kwaye iqanduselwe ukuma okwethutyana ngaphakathi, ithusi liyanyibilika emanzini. Ukususa ubhedu ongayisebenzisa Isihluzi esisebenzayo sekhabhoni okanye ukuvumela amanzi abaleke kumbhobho okomzuzu ngaphambi kokusebenzisa amanzi e-aquarium.
Ezinye iimveliso ezinjenge-flocculants ngamanye amaxesha zisetyenziswa emanzini kamasipala. Oku kunceda ekufumaneni amanzi amhlophe ecwecwe kwaye kungasuswa ngamalahle asebenzayo.
Amanzi akhutshwa emithonjeni nawo anokufumana ixabiso eliphantsi. Sinokukhetha kunye nohlobo lwamanzi ngokokusetyenziswa esiza kukunika kona. Into eluncedo kula manzi kukuba ayinayo i-chlorine okanye enye into ekubulala iintsholongwane ekufuneka isuswe. Kananjalo azihlali ziqulathe izinto ezinobungozi kwintlanzi. Kwelinye icala, ukungancedi kwayo kukuba inokuba nezinto ekufuneka siyazi ngazo kwaye siziphelise ngokuxhomekeke kubunzulu esiwakhupha kuwo amanzi.
La manzi ahlala equlathe iigesi ezichithakeleyo. Phakathi kwezi gesi sifumana ikhabhon diokside kunye nenitrogen. Ukususa ezi gesi zichithakeleyo vuthulula nje amanzi iiyure ezimbalwa. Enye ingxaki enokuboniswa ngamanzi emithombo kukuba ine-iron engaphezulu inyibilikisiwe. Singayisusa ngokulula le ayini ngokufaka amanzi emanzini.
Enye yeempawu zokuba kutheni amanzi anganconywa kwaphela kukuba ioksijini iphantsi. Ukuba siza kuba neentlanzi, eyona nto ifanelekileyo kukuba amanzi anenxalenye elungileyo yeoksijini. Kungcono ukushukumisa amanzi ngamandla iiyure ezimbalwa ngaphambi kokuwasebenzisa. Nathi kufuneka sibe nayo un ioksijini Ifakwe kwi-aquarium ukunceda ioksijini emanzini.
Athini amanzi oza kuwasebenzisa kwi-aquariums: abanye
Kukho amanye amanzi, nangona engacetyiswanga kangako, anokusetyenziswa ngaphandle kwengxaki. Kuya kufuneka sazi kakuhle iiparameter kunye neempawu zokuyizinzisa kwi-aquarium. Amanzi emvula yenye yazo. Singawagcina amanzi emvula ukuze siwasebenzise nanini na silinde ukuba anethise okwethutyana. Oku kuyenzelwa oko kuba sinokufumana amanzi ngaphandle kwento evela emoyeni kuba ibikhe yanyanzeleka ngaphambili. Kuya kufuneka ulinde nophahla kunye nemijelo ukuze icocwe.
Amanzi emvula aneempawu zokuthamba kakhulu. Oko kukuthi, kuyafana namanzi e-osmosis okanye amanzi ahlaziyekileyo. Eyona nto ifanelekileyo kukusebenzisa isihluzi esisebenzayo sekhabhoni ukuqinisekisa ukuba amanzi aya kuba nomgangatho olungileyo.
Ndiyathemba ukuba ngolwazi olunje ungafunda ngakumbi malunga namanzi oza kuwasebenzisa kwi-aquariums.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ngawaphi amanzi oza kuwasebenzisa kwi-aquariums
Kule nqaku banike ngokungabalulekanga kwiiChloramines kwaye kuya kufuneka ulumke kakhulu ngabo.
Ukulingana kweentlanzi kwi-aquarium